Oromo Free Speech: Atileetotii Naannoo Oromiyaa Addunyaa Fiigichaan Moohumatti Jiran
Atileetotii Naannoo Oromiyaa Addunyaa Fiigichaan Moohumatti Jiran
Soraa Halakee irraa
AtileetotIi naannoo Oromiyaa biyya keessaa fi biyya alaalleetti fiigichaan moohumatti jiran
Sadaasa 25, 2014, WASHINGTON, DC (VOA Afaan Oromoo) —Abbebee Biqilaa,ilmaan obboo Dibaabaa,Daraartuu,Qananiisaa,Hayilee dabalee yoo dorgommii fiigichaa maqaa dhaahan yoo hedduu Oromiyumatti mooha. Dorgommii biyya keessaa fi biyya alaallee taatu yoo hedduu jaruma.
Akka leenjisaa Toleeraa Dinqaa Finfinnee dubbatetti dorgommii ‘ Great Run’ Finfinneetti qopheessan 14essoo Wuddee Ayyaalewoo tokkeessoo Netsaanneti Guddataa(Oromiyaa) irraa lammeessoo bahe.
Dhiiraan ammo Azmaraa Beqqelee tokkeesoso,Addunyaa Taakkelee lammeessoo. Maratoonii km 21 Indiitti dorgoman Guyyee Adoolaatti atileetota Keenyaa caalee tokkeessoo tahe.
Maratooni km 21 ta Indiitti dorgoman ammo Guye Adoolaa(Oromiyaa) irraa tokkeesso bahee moohe,akka kilabiitti ammoo kilabii Poolisii Oromiyaatti moohe.
Kubbaa miilaa keessaa ammo maanajera Kilabii kubbaa miilaa Masrii ya hujii irraa buusanii,Naajeriyalleen ka ufii buusuuf mudduutti jirti.
Maanajerii Naayjeeriyaa,Istfeen Keyshi Kilabii isaa Waancaa Afrikaatii jabeessee hin qopheessinee jedhanii akka innii irraa bu’u mudduutti jiran.
Bafanaa Bafaana Afrika Kibbaa,A’aarbii Ayvoorii Koosti,Hurjiin gugurraalleen Gaanaa,nyenyeecnii Kameruun Rasaasii Zaambiyaa fi walumatut biyya 16 dorgommii tanaa qophiiti jira.
Farahoos,kilabiin kubbaa miilaa Masrii dorgommii waancaa kubbaa miilaa Afrikaatiif hin dabarre manaajera isii Shawikyii Gaharibiitti balleessaa muranii hujii irraa buusan.Gaharib nama ganna 55 bara 2013 hujii tana itti kennan. Masriin Waancaa Kubbaa Miilaa Afrikaa marroo torba mootee barana hin taaneef.
Woma taateefuu dorgommii waancaa Afirkaa bara 2015 ta bara dhufuu biyya 16 dabre.Kudhanii jahaanuu Afrikaa gama Kaabaa,Kibbaa,Jidduti fi Dhiyaatti dabree Afrikaan gamii Bahaa fiigichaan addunyaa dura jirtu kubbaa miilaatiin ammoo addunyaa eegee jirtu baranallee hin dabarre.